Ịzụta uzo gestodene (60282-87-3) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Gestodene ntụ ntụ (60282-87-3)
SKU: 60282-87-3. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụ ọka Gestodene (60282-87-3), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Gestodene ntụ ntụ, Aha ya bụ Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Logest, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle, na Triadene nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Gestodene bụ ọgwụ mgbochi hormonal progestogen. Ngwaahịa nwere gestoden gụnyere Meliane, nke nwere 20 mcg nke ethinylestradiol na 75 mcg nke gestodene; na Gynera, nke nwere 30 mcg nke ethinylstradiol na 75 mcg nke gestodene.
Gestodene ntụ ntụ
Gestodene ntụ ntụ isi agwa
aha: Gestodene ntụ ntụ
Molekụla Formula: C21H26O2
Ọbara arọ: 310.43
Aha Igwe: Gestodene uzuzu
Aha aha: Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Logest, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle, na Triadene, na ndị ọzọ
Gestodene ntụ ntụ Usage
Gestodene uzuzu bu uzo nke nwere ike nke oma, o nwekwara ike narogenic, antimineralocorticoid, na oru glucocorticoid. Site n'oru ogwu, o nwere uto antigonadotropic na arụ ọrụ antiestrogenic.
Na bioavailability nke Gestodene ntụ ntụ bụ 87 ka 100%. N'adịghị ka ndị ọzọ na-agbapụta ọgbọ nke atọ dị ka desogestrel na norgestimate, Gestodene ntụ ntụ abụghị ihe eji eme ihe .Ọkara ndụ ndụ bụ 12 ka 14 awa.
Uru nke na-ewere Gestodene ntụ ntụ (Femoden) gụnyere:
ọ bụ otu n'ime ụzọ a pụrụ ịdabere na ya maka ime mgbochi ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi
ọ dịghị egbochi mmekọahụ
ọ na-emekarị oge gị oge niile, na-edozi ma na-egbu mgbu
ọ nwere ike inye aka na mgbaàmà ndị na-eme tupu oge eruo.
Gestodene ntụ ntụ (Femodene) agaghị echebe gị pụọ na ọrịa ndị nwere mmekọahụ, dịka Chlamydia ma ọ bụ nje HIV. Naanị condom nwere ike inyere aka ime nke a.
Ekwesiri ime ka Femodene dị ka a gwara iji gbochie ime ime.
Kedu ihe nyocha nke Gestodene ntụ ntụ
Were Gestodene na ntụ na ethinylradiol dịka onye dọkịta kwuru. Soro ntuziaka ndị dị na labelị ọgwụ gị nke ọma.
Ngwá Gestodene na Etinylestradiol ọgwụ dọkịta gị na-atụ aro ga-adabere na ndị na-esonụ (jiri ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe niile metụtara):
a na-emeso ọnọdụ a
ọnọdụ ọgwụ ndị ọzọ ị nwere
ọgwụ ndị ọzọ ị na-aṅụ
otú ị si emeghachi omume na ọgwụ a
Ngwá na-egbuke egbuke na ethinylestradiol dị na usoro ndị a:
Desogestrel-ethinyl Estradiol Tablehas Oral Tablet
Drospirenone / ethinyl Estradiol / levomefolate 3 Mg-0.02 Mg-0.451 Mg Oral Tablet
Drospirenone / ethinyl Estradiol / levomefolate 3 Mg-0.03 Mg-0.451 Mg Oral Tablet
Ethinyl Estradiol-etonogestrel 0.015 Mg-0.120 Mg Ogwe osisi
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Biphasic Ogologo Mbadamba Okpokoro Oro
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Low Dose Biphasic Extended Oval Tablet
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Quadriphasic Okpokoro Oral Tablet
Kedu ka ntụ ntụ na-arụ ọrụ
Mkpụrụ akwụkwọ Femodene bụ ụdị ọgwụ mgbochi hormonal nke a na-akpọkarị 'pill' ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ọgwụ ọnụ. Mkpụrụ akwụkwọ Femodene nwere ihe abụọ na-arụsi ọrụ ike, ethinylstradiol na Gestodene ntụ ntụ. Ndị a bụ nsụgharị sụgharịrị nke hormones na-emekarị na nwanyi, estrogen na progesterone. Egwu ethlichyll bụ estrogen na Gestodene uzuzu bu ubochi nke uzo ato nke progetene.
Na - ejikọta ọgwụ mgbochi ime ọnụ dị ka Femodene na - arụ ọrụ site n'ịdị na - agafe oge ọ bụla. N'ihe dị ka nwanyị na-ahụkarị, ọnọdụ nke hormones na-agbanwe kwa ọnwa. Na homonụ na-eme ka akwa si na ovaries (ovulation) wepụta ya ma dozie imechi akpa nwa maka ime ime. Mgbe ngwụcha nke ọ bụla, ọ bụrụ na àkwá adịghị etinye aka na ọkwa nke hormones ọdịda, na-eme ka a na-agbapụta nwa akpa nwa dịka oge ọ bụla.
Nchịkọta nke homonụ kwa ụbọchị nke a na-ebute na pill na-arụ ọrụ site na ịghọgbu ahụ gị na-eche na ịzụlitelarịrị emeela. Nke a na - egbochi àkwá site n'ịka nká na ịtọhapụ ya site na ovaries kwa ọnwa.
Hụmmonụ ahụ na-emekwa ka ọkpụkpụ nke anụ ahụ dị na olu nke akpa nwa, nke na-eme ka o siere ya ike ka sperm gafee site na ikpu n'ime akpa nwa ma rute akwa. Ha na-agbanwekwa àgwà nke ime akpa nwa (endometrium), na-eme ka o yie ka egg fertilized nwere ike ịbanye n'ebe ahụ.
Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ buru atụmatụ ịtụrụ ime.
FDA na-akọwapụta ọgwụ ndị dabeere na nchekwa maka iji n'oge ime. Akara ise - A, B, C, D, na X, na-eji ha kpoo ihe ize ndụ nwere ike ime nwa nwa e bu n'afọ mgbe a na-aṅụ ọgwụ n'oge ime ime.
Ethinyl Estradiol / Gestodene ntụ ntụ na-adaba na ụdị X:
E gosiputara na ụmụ nwanyị na-ewere Etinyl Estradiol / Gestodene ntụ ntụ n'oge ime ime nwere ike inwe ụmụ nwere nsogbu. Enweghị ọnọdụ ebe uru nke ọgwụ na-enye maka nne na-esi na-ebute ihe ize ndụ nke nsogbu nye nwa ahụ. A gaghị eji ọgwụ ndị a eme ihe mgbe nile.
Gestodene ntụ ntụ Marketing
Gestodene ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Mmetụta dị na Gestodene ntụ ntụ nwere ike ịgụnye:
Isi ọwụwa, mgbanwe ahụ, ọnọdụ ịda mbà n'obi / mgbanwe, mgbu obi ma ọ bụ nro, mgbanwe na libido. Nsogbu GI dịka ọgbụgbọ na ngbu abdominal.
Esi zụta Gestodene ntụ ntụ si AASraw
Gestodene ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
Gestodene ntụ ntụ maka ire ere: Ihe 10 mara banyere Gestodene ntụ ntụ
1 nyochaa maka Fọl Gestodene (60282-87-3)
Gestodene ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi